चीन र भारतमध्य कसको रेल पहिला आउछ त नेपालमा ? || सुनौलो नेपाल
चीन र भारतमध्य कसको रेल पहिला आउछ त नेपालमा ?
काठमाडौँ — नेपालले रेल मार्ग निर्माणको लिखित समझदारी गर्न दुवै छिमेकी भारत तथा चीनलाई प्रस्ताव पठाएको छ । धेरै अघिदेखि छलफल भए पनि दुईपक्षीय सहमतिका लागि पठाइएको पत्र सँगैजस्तो परेको छ । यतिखेर सरकार दुवै देशको प्रतिक्रिया पर्खिइरहेको छ ।
चीनको रेल सीमामा आइपुग्नुभन्दा धेरैअघि छिमेकी भारतले नेपालभित्रै रेल गुडाइसकेको भए पनि काठमाडाैं जोड्ने रेलबारे सँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
रेल विभागका अनुसार भारतको जयनगरबाट जनकपुर जोड्ने रेलमार्गलाई नयाँ बनाएर आगामी पुसदेखि पुन: सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । उक्त रेललाई जनकपुरबाट बर्दिबाससम्म पुर्‍याउन काम भइरहेको छ । पूर्ण सञ्चालनमा आउँदा जयनगर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर अन्तरदेशीय रेल सञ्चालन हुनेछ । हुन त सन् १९३७ मा नै नेपालमा रेल सञ्चालनमा थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा रेल सञ्चालन गरेको भए पनि अहिलेसम्म राजधानी जोड्ने रेलका लागि सरकारले छिमेकीकै मुख ताकिरहेको छ । चीन र भारत दुवैले आफ्नो मुलुकको रेल काठमाडौं ल्याउने बताइसकेका छन् । त्यही आधारमा नेपालको प्रस्ताव गएको हो । नेपालले दुवैतर्फ आफ्नो तवरबाट गरिएको सम्भाव्यका आधारमा तयार प्रस्ताव पठाएको हो ।
चीनले नेपालमा रेल ल्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेर सम्भव भएको माइन्युट गरिसकेको रेल विभागका प्रवक्ता कृष्णभक्त उपाध्यायले बताए । ‘अब रेलको सम्भाव्य होइन, विस्तृत अध्ययन गर्ने र प्राविधिक कार्य अघि बढाउने सहमति हुने हो,’ उनले भने, ‘चीन र भारत दुवैतर्फ रेलको प्रस्ताव गइसकेको छ । यसमा सहमति हुन र उनीहरूको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।’ चीनसँग भर्खरै रेलबारे वार्ता गरेर फर्केका उपाध्यायले अब चीनले बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘कुन तवरमा बनाउने भन्ने विषय राजनीतिक सहमतिमा भर पर्छ । यसमा कुराकानी भइरहेको होला । रफ्तारमा काम अघि बढे आठ वर्षमा रेलवे लिक काठमाडौं जोडिनेछ ।’ चीनसँग मात्र होइन, भारतसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको विभागले जनाएको छ । ‘नेपालले दुईपक्षीय सहमतिका लागि भारत र चीन दुवैलाई प्रस्ताव गरिसकेको भौतिक पुनर्निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विनोद भट्टराईले बताए । ‘हामीले आफ्नोतर्फबाट काम गरेर प्रस्ताव गरेका हौं । अब उनीहरूको प्रतिक्रियापछि सहमतिमा जानेछ । यो जति छिटो भयो उति छिटो काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
आठ दिनदेखि बेपत्ता शिशिर मृत अवस्थामा फेला
राष्ट्रपतिलाई आफ्नै सांसदले भनिन लो प्रोफाइल मा बस्नुहोस्।